Mai Chibwe VekwaZimuto: Mibvunzo nemhinduro 4
Takabva kumibvunzo nemhinduro 1, 2, and 3, saka tava pano nhasi pa 4. Kana une mubvunzo tanga wanotarisa kwese uku kwatakabva kuti hakuna here mhinduro yakapiwa kare pamubvunzo wako. Zvadaro chitumira mubvunzo wako ugotarisa mhinduro pano.
Chii chinoitika kana ndichikwira mukadzi wemunhu?
Sei mukadzi wemunhu achinaka kupfuura wangu?
Vakawanda vanobvunza mubvunzo uyu.
Mukadzi weshamwari yangu anondidya chombo asi wangu haadi. Ndodii?
Hapana chinoitika chakasiyana nechinoitika kana uchivata nomukadzi wako wemumba asi kungoti unofanira kuhwisisa zvinhu zvakati wandei.
1 mukadzi wemunhu anohura newe zvinoreva kuti anohura nevamwe varume saka unokwanisa kubata zvigwere zvaanobata kubva kumahurerume awa.
2 kana murume akasiya urume mukati memukadzi, hunoita mazuva matatu huri upenyu, hoita nguva inopguura mazuva matatu kusukwa kubva muchutubu chemukadzi. Zvinoreva kuti murume wake akavata naye iwe ukavata naye unotonyika chombo chako muurume hwemurume wake, wosiyavo hwako imomo, vamwe varume vouyavo vachinyika zvombo zvavo imomo. Ndoosaka zvichinzi murume kuhura kushaya SELF RESPECT. Zvakangofanana nokuti varume vashanunu vovhenganisa urume hwavo mukapu iwe woenda wondonyika chombo chako imomo.
3 Kuhura kwemurume ane mukadzi mumba kunowedzera chanzi yokuita CANCER yechibereko yomukadzi wemumba.
4 Ukapa mukadzi wako siki, akasaziva kuti ane siki, akaita mimba ane siki, zvinokwanisa kukanganisa mwana.
5 Kana uchihura shandisa makondhomu nguva dzese. Izvi zvinonetsa vakawanda nokuti vakadzi vanohura vanhu vanofarirawo kuitira zvikomba zvavo zvinhu zvavasingaitiri varume mumba, saka uchaona kuti anofaririra kuita zvimwe zvinokwanisa kukupa EXCITEMENT yokuti unokwanisa kuzofunga kondhomu watomutundira kare mukati. Zvigwere hozofunga watobata.
Varume vakaanda vanonyora vachibvunza kuti sei mukadzi wemunhu achinaka kupfuura wangu. Ipapo wakewo ari kunakira umwe murume kupfuura zvaanoita kumba. Ndihwo ufuza hwedu vanhu.
Mai chibwe, Ndoitawo sei. Vhiki yakapera ndakas***wa nemwana ane makore 14. Hameno chakangondibatawo. Ndakangokundikana ndokudaidza mukomana uyu ndokumukurudzira kusvika ndavata naye. Ndodii? Ndine makore 23.
Kuvata nemwana ane makore 14 chinhu chakaipa chose. Unokuvadza fungwa nomuviri wemwana. Kubva ipapo zvinosungisa uye unokwanisa kugara mujeri kwemakore anopfuura gumi. Ndinoziva kuti zvinokunetsa kundozviman'arira kumapurisa asi dai waikwanisa waienda. Zvinokwanisika kuti unetogwara mufungwa zvokuti nyaya iyi ichaitikazve ugozosungwa hako. Zvinokwanisikazve kuti mukomana uyu achaudza umwe munhu mukuru ugosungwa.
Kana usingakwanisi, chifunga zvokuita kuti zvisaitikazve, uye kuti udanane nevarume vezera rako. Hazvifanigwi kuti unge uchivata nomwana uyu.
Ndingazvifambisawo sei? Ndinoshanda nevamwe vana mai vedzimba vanotaura nyaya dzavo vakasununguka nokuti vanozivana. Vanotaura mavatirane avanoita nevarume vavo. Ini murume wangu kana akada kundi***ra kamwe pavhiki anenge atowanza vhiki yacho. Pane mushonga wandingamupa here kuti ade nguva dzese.
Mushonga ndewekuzvigadzirira muviri wako kuti murume wako akuone uri munhu anomuitisa zemo. Hakuna umwe mushonga unoshanda. Tanga wazvibvunza kuti murume wako anoziva here kuti uri kutodawo kuti muvatane kakawanda pavhiki? Anoziva sei kuti ndizvo zvaunoda? Wakamuudza here? Kune vanhukazi vakawanda vanongomirira kusvika murume akumbira kuisa. Iyewo mukadzi kana kumbofunga kuti audze murume, bodo, kungoti zii. Zvino murumewo anofunga kuti mukadzi haadi. Zvokuvatana zvinoda kuti umwe noumwe paadira oudza umwe zvinhu zvoitwa. Nyaya ndeyevaviri kwete munhu umwe chete.
hino chiona wava kutofunga nezvemishonga kutsvaka kukuvadza murume pazvinhu zvinongoda mashoko okutaurirana.
Imiwo varume ngwaraivo mumba. Bvunza mukadzi wako kuti nyaya yenyu iri papi pamaitire uye kuti munoita zvakamukwanisawo here. Kana usingafariri kuwanza taurira mukadzi wako chikonzero azive kuti asadyiwa moyo.
Weti yegudo inoshanda sei?
Weti yegudo inobuda mugudo yoenda pavhu, vhu riya ronyorova. Kana kuchipisa vhu rinooma romirira kuzoitigwa weti futi umwe musi. Hapana chinhu chinowanokwa muweti yegudo chinoshanda pane imwe nyaya inoita nezvevanhu.
Asi kana uri munhu akachenjera tora vhu rine weti yegudo iyi worinyika mumvura, worega mvura iya yoita iyo weti yegudo. Woisa mvura iya mupoto woibhoira kuti utachiona hufe. Izvi kuitira kuti usapa vanhu utachiona.
Zvadaro tora mvura iya uise muzvibhodhoro zvidiki wotengesera mapenzi woti iyi iweti yegudo inorapa zvakawanda. Usavaudza kuti zvii zvacho zvinorapwa. Ingotengesa 20USD anotenga otenga asingadi osiya. Iwe tora mari yako undotengera vana hembhe dzokupfeka.
Murume kubudisa chombo kana oda kutunda, zvinobatsira here kudzivirira mimba?
Kare zvaifungigwa kuti zvinobatsira asi zvakazoonekwa kuti hazvinanyi kubatsira. Kana chombo chikamira, mukaita nguva muchirezvana, fungwa yomurume inoti pane chichaitika, chomo roramba chimire chakamirira kuti zviitike. Pakuramba chimire apa murume anobudisa oiri yakatsekseka chose uye inonakidza kubata. (Kana usina kumboibata misa chombo chomurume wako kusvika abuda oiri iyi)
Zvadaro mukazorhojana oiri iya inoramba ichibuda kusvika azotunda urume.
Oiri ine mhodzi dzeurume dzinokwanisa kuitisa mimba. Kubudisa (kuvhomora) chombo kana woda kutunda hazvirevi chinhu nokuti murume anenge atosiya mhodzi (sperm) dzeurume (semen) mukati memukadzi kare. Hazvibatsiri chinhu pakudzvirira mimba.
Pfekeranai makondhomu chete.
Mushonga wekuti murume wako afunge iwewe chete unawo kare. Muchonga uyu uno gadzigwa nokuvhenganisa zvinhu zvinoti CHIUNO, Rudo, unyanzwi hwekufidha, uye kusununguka pakutaura. Unokwanisa kupedza mari uchinotenga zvimwe zvinotengwa asi haufi wakawana umwe mushonga unopfuura uyu.
Muchangoroorana, pedza nguva nomurume wako muchidzidzsana kuvatana zvinogutsa uye kutaudzana zvinohwisisanwa. Chete chete. Mobikirana modya mese muchita nyaya.
Usafa wakakangamwa izvi. Mushonga ndiwe nemafungire ako.
7 months pregnant ndingatanga here kushandisa masuwo?
Chikuru chinodiwa kuramba uchivata nomurume wako. Kana uri munhu anotunda pakuvatana nomurume une rombo rakanaka nokuti zvinobatsira. Asi kungogaropiwa urume kunobatsira chose saka chikuru kufarira kuvata nomurume.
Chero zvodii, usaisa zvinhu zvisiri chombo mukati mechitubu chako. Usaterera zvokushandisa mishonga yechivanhu. Kuzvara hakudi mishonga. Siyana nazvo. Ingowedzera kuiswa nomurume wako chete.
Wedzera kufambafamba sokuti 2 kilometres pazuva.
8 Magaro makuru chaizvo
Nhai Mai chibwe, ndibatsireiwo. Ndava nomukomana asi hatina kumboita bonde tese. Ndichiri mhandara. Ko ichokwadi here kuti magaro mahombe (very big) anoita zvinetse kuvata nomurume.
Hakuna munhu ane magaro akakura zvokuti anotdza kupinzwa chombo nomurume. Pane chitubu chomukadzi panhu pokuti kana ukada kupinzwa nemberi kana neshure kana kuvata nedivi wosimudza gumbo murume opinza. Chero maititire awada zvinokwanisika. Saizi yemagaro hainei nazvo. Ukaenda kuzvipatara munyika dzese uchaona vanhukadzi vane mimba vakakora zvokuti vachiuya kuzovhenekwa. Zvinoreva kuti pane murume waakavata naye kusvika aita mimba. Usaita nyaya nokuvatana nomurume pazaisi yemagaro.
Asi hwisisa wega kuti kuita mumhu mukurusa zvinokonzera kuti uzokwanisa kuita DIABETES kana wati kurei pazera. Chigwere ichi chiri kubatwa nevakawanda uye chinouraya vakawanda. Dai wazama kuderedza muviri zvinova zvinozokubatsirawo pakunatsoiswa.
9 Ungabata chirwere here kana ukas***wa nomurume ane mubobobo zviri zvemushonga? Kana zvichiita kuiti uiswe, zvinoitazve kuti ubate zvigwere zvese zvine munhu wacho akuisa. Kana akakuphekera kondhomu zvinoita nani, asi iwe dai warega zvokuhura uye kureva nhema kuti munhu wauri kuhura naye ingari yokuti ane mushonga. Hakuna chinhu chinohi mushonga wekuhura nawo. Munhu wese anohura nokuti ari kuda kuhura, kuzhe kwekuti wabatwa chibharo. Kana wabatwa chibharo enda undoudza mapurisa munhu asungwe, kwete kungoti ane mushonga. Hakuna mushonga wakadaro.
10 Ko kana taroorana ndinofanira kuita nhumbu kwapera mwedzi mingani? Zviri kwamuri kuti munoita nguva yakadii musina kuita mimba. Mazuvano mima ndeyokutosarudza kuti toita riini. Chikuru ndechokuti mune mari yokuriritira mhuri yenyu here. Kana musina imboshandai muise mari kuBANK mozotanga mhuri mari yavapo.
Hakuna mutemo unoti tangai mhuri kwapera nguva yokuti, asi udzai mhuri dzenyu kuti moda kumbomira muwana nguva yokunakirana mega pasina mwana. Usazvinetsa nenyaya dzisina basa. Hakuna munhu anoudza umwe kuti chiita mimba. Zvaaitwa kare kare sekuru vako vasati vazvagwa.
11 Ndibatsireiwo. Murume wangu akaenda kuSouth Africa ini ndokusara nevabereki vake. Baba vake vanopota vachiuya kuBedroom kwangu vachindikwira. Ndingaitawo sei? Ko ndikaita nhumbu ? Usataura nyaya yokuti baba vake vanopota vachiuya kuBedroom kwako. Iwe kana vauya ndiwe unovabvisira bhurugwa. Hauna kutaura nyaya yokuti banokufosa kuvhura makumbo. Ndiwe wega unovavhurira ivo vongokurhoja mese muchiwirirana. Sakamese muri nhubu. Hazviiti kuti wakambovata nomunhu, uku wozovata nababa vake. Hazviiti kuti munhu avate nomuroora. ndiyo inohi ABOMINATION iyoyo. Mangofanana nembwa dzisingahwisisi zvokukuita. Saka zvawataura zvemiba zvinoreva kuti hamusi kushandisa makondhomu uye iwe hausi kumwa mapiritsi. Uri kuita zvounhunzvatunzva chaizvo. Funga pachauya murume wako kuti achahwa sei kana aziva kuti mukadzi wake anovata nababa vake.
Chokuita ndechokutaura natezvara wako iyeye womuudza kuti akakupindira futi unoridza mhere kusvika raini rese razviziva uye uchamusungisa. Uchaona kuti haadzoki. Uwewo kana uchida murume wako asi zvichikunetsa kusagaroiswa, udza murume apote achidzoka uye fanoshandisa maoko. Iwewo pota uchienda kumurume wonoita mazuva matatu kana vhiki uriko. Zvauri kuti izvi kutsveruka. Siyana nazvo.
12 "Mhata" ine matinji yakamira sei Sori hakuna "Mhata" ine matinji. Matinji anoita pa Mheche. Mhata basa rayo kubudisa svina mumuviri. saka hazviiti kuti paite matinji. Une makore mangani?
13 Unoona sei kuti mukomana wako anokuda? Hazviiti kuti zive kuti mukomana wako anokuda musina kudanana nguva refu, sokuti makore maviri. Unopedzisira wava kumuziva mafungire ake, maitire ake, nezvaanokuitira, uye kuti kana uchitaura naye anokuterera uye anokuudza zviri pamoyo pake. Mese munoshamwaidzana.
Asi zvadaro hazvirevi kuti hamuzorambani. Munokwanisa kuganganisirana mugoramana asi kana mange mune rudo chaigo, mukazosanga chero papera makore munokwanisa kuhwa hana kurova ne EXCITEMENT yokuonana. Kana maimbovatana munozviwana zviri nyore kuvatana, zvikuru kana mukadzi ariye akaramba murume asi murume aimuda. Mukangotaudzana munopedzisira modanana futi.
Ndoosaka zvichinzi usadanana nomunhu waunoziva kuti aimova muLONG TERM RELATIONSHIP.
14 Kuvatana musango kwakamira sei? Kana mafunga kuvatana musango, hwisisai kuti munokwanisa kuonekwa nevamwe vanhu uye munokwanisa kusangana nemhuka dzomusango dzinokuvadza. Munokwanisazve kurumwa nembwa dzevavhimi. Kana huri usiku chenjerai nyoka.
Pasina zvese izvi, kuvatana musango chinhu chinodakadza chaizvo zvokuti kana makaroorana paya potai muchimbozviita. Zvinoitisa zemo guru nokuda kwekuti zvinoonekwa sechinhu chomusikahwa kana kuti unhubu. Chinhu chakanaka kuti mupote muchivatana panzvimo dzakasiyana siyana. Kwete mumba chete kwete pamubhedha chete.
15 Chombo chinonaka here kana murume achipinza mukati? Chii chinonzi kunaka? Kana une zemo rakakwirira, murume paanopinza chombo, pakupinndwa nacho ipapo panoita nguva tingati ma SECONDS kuda matatu yaunohwa muviri wese kunakigwa chose chose nokupinda kwechombo chokuti wega unotosimudzira chiuno kuti chombo chigare zvakanaka mukati. Kana murume ari shure wakafongora, unohwa kuda kuti anatse kupinda. Zvinonaka.
Kozoti apinza, hazviiti kuti apinza mese mongoti zii. Chiuno chega chinokufosa kuda kukoirana. Murume akangopinza unohwa kuda kuti ngaachikoira. Akatanga kukoira unonakigwa zvokushushikana fungwa kusvika wanotanga kuchemerera wega muviri uchidavira kuti usi kuiswa zvinonaka.
Hazviiti kukwanisa kutsanangura manakire echombo asi chikwadi ndechokuti chinonaka uye chinovaraidza, uye mukadzi anonakigwa kupfuura murume kana wawana murume ane njere.
Kana une mufaro unoda kuiswa.
Kana une nhamo inokushusha ukaiswa zvakanaka unombotonhodzwa moyo kwenguva.
Ukamboitigwa zvinotyisa sokuti wabheuka nemota, kuiswa kunobatsira RECOVERY nokuti kunokuyeuchidza kuti uri mupenyu.
16 Zvinoita here kubaiwa chibereko pakuvatana? Pamwe ndohwa sokuti ari kubaya paasingasibayi Chibereko hachisi mukati mechutubu, asi kuti mukova wacho uri muchitubu. Mukova wacho kaburi kadikidiki kasingakwani kana penzura. Unokwanisa kubaiwapo zvichibva kuti muri kuitana sei asi haungazivi kuti ari kubayapo. Kana murume akanogofa paasingasigofi pasina kujaira kugofiwa unohwa kunaka kwacho kwakasiyana.
17 Ini ndine dambudziko rangu mukadzi wangu haafariri bonde asi ndinoita zvose during foreplay. Ndakazosvika pakumuudza kuti ok iwe we kana wanzwa kuti urikuda bonde wonditangawo ndobva ndaziva nokuti nguva dzose pandinoti ndoda bonde anongoti I'm not in the mood. Asi kusvika parizvino haasati ambonditi ndoda bonde saka zvinoreva here kuti haridi bonde mukadzi wangu kana kuti ane spiritual husband kana iriko? Ini zve kutsvaka hure handidi ndoda mukadzi wangu ne moyo wose asizve bonde ndinorida. handizivi kuti ndodii takaitaura nyaya iyi kakawandisa asi hapana chachinja, moyo wangu unogwadziwa. togona kuita 2 months pasina bonde. Zvinokwanisika kuti pane chikonzero chausingadi kutaura nezvacho kana kuti hautochizivi. Vanhukadzi vashomanana vasingadi zvokuvatana izvi. Kuvatana kunofadza moyo uye kunoderedza kupopotedzana mumba. Ukaona mukadzi anogaropopota muraini, ingari yokuti haasi kuguta mumba.
Kana mune mwana ari pasi pemakore maviri, zvinokwanisika kuti mukadzi wako ane chigwere chinohi Post-Natal Depression. Zvinokwanisikazve kuti pakuiswa mukadzi wako haanakigwi nazvo, kusiri kuti imhosva yako asi kungoti kune vanhu vasinganakigwi nokuvatana. Vanhu ava vashoma zvokuti mhomho yese inonakigwa nazvo haihwisisi kuti sei munhu achishaya kunakigwa nechinhu chinonaka kudai.
Kotizve kana wakambomuhurira akatadza kukuregerera mumoyo make. Zvinonetsa kuti ade kuvata newe. Kotizve kana iye akamobatwa chibharo kare , kana kuti akabvisa mimba, kana kuti akaona chinhu chinotyisa chichitwa kumunhukadzi ari mwanana. Zvese izvi zvinokanganisa mafungire ake panyaya dzokuvatana.
Endai kuProfessional Counselling, kwete zvaana tete vanongoti kumwana wavo "Enda undoiswa kaviri pazuva" vasingahwisis kuti dambudziko chi.
18 Chibereko chinosukwa nomushonga upi? Chibereko (Womb) kana chichifanira kusukwa chinosukwa nemaitire anohi D and C anoitwa kuchipatara chete. Hakuna mamwe masukire aungaita chibereko. Kana uri munhu asina njere kana ruzivo, uchaudzwa nevanhu vanoda mari kwauri kuti uvape mari vagokupa mushonga wekusuka chibereko. Vanodaro nokuona kuti une njere shoma chose asi hwisisa kuti mushonga wavachakupa kana ukasachenjera unozvikuvadza nawo.
19 Mukadzi wangu ane ndebvu. Chingava chinhu chakaipa here? Hapana chinhu chakaipa kuti mukadzi aite ndebvu. Kune vanhukadzi vakawanda chose vane ndebvu dzinotoonekwa, zvikuru vati kurei kupfuura makore 35 uye kurudzi gwevachena kana maIndhiya.
Anokwanisa kunopiwa mushonga wekuti vhudzi rekumeso riite shoma asi zvinobv pakuti iwe murume wake unomuona sei uye kuti iyewo anozviona sei. Asi hapana dambudziko rokuti zvingahi zvine basa rei kuva nendebvu.
Kuvata nomurume anongodawo zvinoita vamwe
Kuzvara anongozvara zvinoita vamwe
Kubika anongobikawo zvinoita vamwe
Saka damudziko hatina naye.
20 Bhinzi yomunhukadzi inofanira kureba zvakadii? Bhinzi yomunhukadzi hazvina basa kuti yakareba zvakadii nokuti basa rayo kunakira muridzi wayo. Haina rimwe basa.
Saka kureba kwayo hakunawo basa, asi kungoti vakawanda vari pakati pe 5 mm kusvika pa 30 mm tichitarisa kana imire. saka tinoona kuti dzakatosiyana chose asi vese vanongonakigwa nadzo zvakadaro. Iwe dzidza chete kunakigwa neyako.
22 Ndakaroogwa kwava nemakore matatu asi mwana hatina. Zvakaonekwa kuti murume ndiye ane dambudziko. Tingaitawo sei. Kana zvaonekwa kuti murume ndiye asina mhodzi dzakakwana kana kuti anadzo asi dzakaremara, munokwanisa kupiwa mazano okuita kuchipatara ikoko kwamakaudzwa kuti ndiro dambudziko.
Zvokuita zvishoma asi kazhinji murume anozokwanisa kupa mukadzi urume hunokwanisa kuita mimba, saka ndeyokuramba muchiita basa kwete kuregera.
Chimwe ndechokutarisa kuti chikondero chedambudziko iri chiri papi. Ndezvokuzvagwa nazvo here kana kuti pane imwe nyaya.
Koitazve kuti mutarise nyaya dzokutora mwana kubva kunherera. Kune vana vakawanda chose vasina vabereki Tarisaizve ikoko. Pamwe munoona kuti kana pamba pava nomwana munogadzikana hana moita mimba.
23 Chi chinonzi kunyenga mukadzi? Mukomana kana akasangana nomusikana anomuyevedza uye ari munhu anotaurika naye, mukomana anotanga nyaya naye kusvika aona kuti musikana anomuhwissisa. Kusangana kwakadai kunowanzoitika pagwendo kana kuti pamuchato, kuChechi, kubasa, pachikoro, kana kuti munongosanganawo henyu pamwe. Kana mune mafoni musikana anokwanisa kubvuma kupa mukomana nhambha yefoni yake.
Zvadaro mukomana anozotumira mashoko ekutaudzana kumusika, musikana anokwanisa kutanga kupindura kusvika pokuti mukomana anokumbira kuti vadanane pauviri hwavo. Kukumbira kuti vaite mukomana nomusikana ndiko kunohi paChikaranga, KUNYENGA.
Unowa musikana achiti,
" Akandinyenga ndikamuda."
"Akandinyenga ndikamuudza kuti ndiri kufunga"
24 Mushonga wekurapa siki unowanikwepi? Siki inoitiswa nokuvata nemahurerume/mahurekadzi. Hure munhu anovata nemunhu waasina kuroorana naye uye zvikuru achivatazve nevamwe vanhu.
Siki chigwere chechihure. Zvigwere zvechihure zvakawanda asi pachivanhu chese chese chinongohi siki. Kana chiri chigwere chinouraya chakaita se HIV chinohi siki asi chozopiwa rimwe zita futi sokuti NJOVHERA.
Mushnga wesiki kuti wafungira kuti wabata siki, wokasira kunorapwa kuchipatara. Ukanonoka unokwanisa kuzotadza kurapwa. Zvimwe zvezvigwere izvi zvinouraya uye zvinotadzisa kuita vana.
25 Chii chinonzi kubata mukadzi chibharo? Chibharo pachirungu i RAPE. Kumanikidza mukadzi kumuisa iye asingadi. Kubata mukadzi chibharo pamutemo kunosungisa zvokuti munhu anoenda kujere makore akawanda.
1 Kubata mukadzi mazamu, magaro dzimwe nhengo dzomuviri wake hazvibvumigwi.
2 kubvisa mukdzi bhurugwa asingadi hazvibvumigwi.
3 Kufosa muadzi kukubata chombo hakubvumigwi
4 Kufosa mukadzi kumupinza chombo muchitubu, kushure, kana pamwe hazvibvumigwi
Hazvinei kuti mukadzi wako here kana kuti musikana wako kana kuti ishamwari kana kuti munhu wausingazivi.
Kana mukabvumirana kuti upinze chombo mumukadzi, mukatanga kukoirana, iye akachinja mafungire akakuudza kuti haachadi. Unofanira kubvisa chombo mukati make. Ukaramba anokwanisa kukusungisa uye unokwanisa kunoita makore mujeri.
Mazuvano kune mafoni anokwanisa kuRHEKODHA mashoko amunotaurirana zvokuti mapurisa akahwisisa kuti mukadzi akakuudza kuti haasi kuda iwe ukaramba uchiita, unoenda kujere nguva refu.
26 Mushonga wekubata mukadzi achihura unowanikwepi. Mushonga wekubata mukadzi achihura unowanikwa kunowanikwa mushonga wekubata murume achihura.
Wadireiko kuti mukadzi wako ahure ugomubata. Zviri nani kubata mukadzi wako zvakanaka kuti asafunga zvokuhura. Hazvinetsi kubata mukadzi/murume zvakanaka.
27 Chii chinonzi runyoka Hakuna chinhu chaicho chinohi RUNYOKA. Iri ivara rinoshandiswa kutyisidzira varume kuti vasavata nevakadzi vevanhu. Zvinohi mukadzi wanhingi ane runyoka zvofungwa kuti ukavata naye unonamirana naye kusvika murume wake auya. Idzi inhema. Hakuna chinhu chakadaro chinoitika. Vanhu vanonamirana kana mukadzi aita inohi MUSCLE SPASM otadza kurerusa muviri pakuiswa. Murume otadza kuvhomora chombo. Izvi zvinoitika munyika dzese dzepasi rese uye hazvinei neRunyoka.
28 Kuvava kwepamberi pemukadzi kunoitiswa nei? Pamberi panokwanisa kuvava zvakawedzera imwe nguva yemwedzi, zvikuru kana uchangobva kumwedzi nokuti chibereko chinenge chizvisuka panobuda zvinonyorovesa bhurugwa. Pota uchimbobvisa bhurugwa pachirohwa nemhepo. Uyezve pheka mabhurugwa ecotton chete asina zviri Artificial paari. Kana zvichivava zveganyabvu enda undotesitwa kuti pane utachiona here, zvikuru kana pachibuda hwema hwakaipa. Chitubu chemunhukadzi chine ma Bacteria akaBALANZA zvakanaka asi kana BALANCE ikakanganisika unokwanisa kuvaviwa. Kana wakambopinza chinhu chisiri mushona, TAMPON ana chombo chomurume, zvinokwanisika kuti une INFECTION saka enda undokasira kurapwa.
29 Chii chinokonzera kuneta nokukasira kurara kwechombo chomurume Varume vese vanomboita nguva yaasinganatsi kumira chombo, zvikuru kana ava nemakore anopfuura 50. Asi kune vamwe vanonogara vakadaro. Chikonzero chikuru kusamhanya kweropa kwakanaka zvichibva pachigwere chemoyo kana BP. Kana zvaitika kwenguva inopfuura vhiki mbiri ngaaende anotariswa kuti moyo ne BP zviri papi uye oudza murapi kuti chombo hachisi kumira zvakanaka panguva yekurhojana. Koitazve kuti kutya kusamira kunoitisa kuti chisamira. Saka murume anofanisa kusaita hanya nazvo. Kana chichimbomira zvokukwanisa kupinza mumukadzi chozoti rukutu, zvinoreva kuti ropa harisi kunatsochizadza. Mukadzi nomurume batsiranai apa mukadzi agaropurudzira chombo chidzidze kumira. Kusveta chombo kunowedzeresa kumira futi.
30 Kurara nevasikana vaviri pamubhedha umwe Iwe kana wada kuvata nevasikana vari uri munhu anohwisisa kuti umwe noumwe wevasikana vako anonovatawo nevarume vaviri pamubhedha umwe chete saka usazokatyamara kana wopiwa dzimwe pasuru dzokuenda nadzi kuvarapi, nedzimwe dzisingarapiki. Hakina murume panyika pano anokwanisa vakadzi vaviri. Asi mukadzi umwe noumwe anokwana varume vakawanda kana vashanu chaivo.
31 Kugona kubata murume pabonde kuita sei? Kuhwisisa kuti mese muri vaviri muri kuisana kwete kuti umwe chete ndiye anoisa umwe. Mukadzi anotambawo nechombo chomurume, kupurudzira, kufuridzira, kuyevedzwa nacho, kutaura nezvacho kumurume. Kupa murume mazamu, magaro, makumbo kuti atambise, kukisa murume muviri wese, asi kumirira kusvika wanatsonyorova, kubvunza murume kuti anoda kushandisa maitire api. Kana mapinzana kushandisa chiuno kukoirana nomurume, kubatirira murume chiuno chake nokumupa RHYTHM yakakodzera kuti anonoke kutunda. Kuchemerera zvinoenderana nokunakigwa. kurumirira muviri wemurume. Kana watundawo ipa murume EXPERIENCE yazvo muite mese saka muudze awedzere kukoira uchitunda Iwewo wedzera kushanda kwechiuno. Kana chombo chikabuda muchitubu iwe mukadzi kasira kuchibata wochidzorera mukati wotangazve kukoira murume. Murume ngaazive kuti anonakira mukadzi. Mapedza usangoti ZII, udza murume kuti zvange zvichinaka uye kuti chananyonaka chii kuti kana ozowedzera mangwana azive zvokuita. Ratidza kushamisika nokunaka kunoita chombo uye murume wako. Shamwaridzana nechombo. Kana muvete ukambundikira murume, isa ruoko pachombo murume avete akakufuratira. Uchaonawo iye oisawo pazamu kana wakamufuratira muvete. Garo kumbira zvinhu zvinoitika, sokuti wokumbira kuti murume akuratidze urume huchibuda muchombo. Anokwanisa kukukoira mazamu iwe uchikwiza chombo nemazamu, wobva watoona Tsaa tsaakubuda kweurume. Chifarawo kuti zvaitika womutsanangurira kushamisa kwazvo. Musi waunoenda kumwedzi chiti murume akukoire mazamu ahwe pane moyo.
31 Chii chandingaita kuti nditundise mukadzi wangu pabonde? Mukadzi anofanira iye kuva nefungwa dzokuda kuvata nomurume wake. Vakadzi vakawanda vanoda zvinhu izvi kupfuura varume vavo asi kungoti ukaita nguva usinawo kumbopiwa nguva refu nomurume wako, unongozopedzisira zvisisakunakiriwo wongosiya zvakadaro. Vakadzi vemumba vakawanda vanoti zviya mapedza, murume oita hope iye osara ozvibatabata kusvika atunda. Varume noufuza havahwisisi kuti mukadzi anodawo kutunda. Chaunofanira kuita kuita nguva usirezvana naye uchiita nguva pabhinzi yake uchiita zvaanofarira kuti uitepo, woitazve nguva uchikweshana naye, womunonokera. Uchaona kuti zvinhu zvinotanga kuchinja.
32 Mai chibwe makadii ndine mubvunzo ini ndine mukadzi wangu ndoshandira kuSA iye ndakamusiya kumba kuZIM pakutanga totaura paphone nepawhatsapp but sometimes anoenda paapp kusvika kana na11 usiku but haataure neni plus ukamufonera anenge achingotaura rough chete chete but kare kwanga kusina zvakadai patakatanga kugara tese saka ndakufunga kuti maybe pamwe akawana hake mumwe zvekuti kana kumba kuzim ndirikufunga kusaendako but l love her very much only her handina girlfriend inini but the way yakuita irikundirwadza nenhau yebasa maybe ndogona kuita 11 month ndisina kumboenda asi ndoitasei Hachisi chinhu chakanaka kusiya mukadzi wako kuZim iwe uchishanda kuRSA. Vanhu hwisisai kuti kufungirana kwese uku hakubvi pakuhura kwemukadzi asi kuti kunobva pakuzi zvawaidai waita iwe dai uriwe mukadzi uyu. Tinovimba vamwe vanhu sezvatinozvivimba isu pachedu. Kana iwe uchiziva kuti unokwanisa kuhura unobva wafunga kuti vese vanoita saizvozvo. Saka tora mukadzi wako ugare naye kuti fungwa dzakadai dzisakusvikira.
33 Ndoitawo sei? Mukadzi wangu haafariri bonde. Ndisingazivi kuti anondida kana kuti haandide. Pabonde anongorara ovhura makumbo kanda ndati ndoda bonde. Tapedza panoita atmosphere pasina anotaura. Ndava kutotya kuuti ndoda bonde. Ndoitawo sei? Kusununguka kwemukadzi pakutaura nezvekuvatana zvinobva pamafungire emurume. Murume ndiye anopa mukadzi kusununguka panyaya idzi. Wana mukana wekusunungura mukadzi wako kuti mukwanise kutaurirana. Kunyarara hazvirevi kuti haana chokutaura asi kuti anotya kutaura zvaanoda.
34 Pane chombo chingarwadza kupinzwa here? Ichokwadi here kuti Kune varume vangandirwadzisa? Munhukadzi akagadzigwa zvokuti anokwanisa kugamuchira chombo kana chipi zvacho zvichibva nokuti watanga wanyorova zvakakodzera uye murume anotanga nokupinza zvishomanana ombomirira ureruse muviri waziva kuti hazvigwadzi. Adaro owedzera kupinza pamwe oita nyaya newe chipinza zvishoma zvishoma kusvika ati nyurududu chombo chese. Zvadaro wega unohwa kuti hazvigwadzi uye unotowedzera kunyorova nokuti une chombo mukati. Chimboitai nyaya uku muchikisana nokusvetana. Iwewo chiita fungwa yokuda kukoigwa . Chitanga kufambisa chiuno kusvika murume atangawo. Uchahwa kuti zvinonaka chose uye hazvigwadzi.
Kana uchitya tangai iwe uvete nomusana murume ari pamusoro. Wovhura makumbo asi woisa maoko ako pakati penyu kuti murume asanyudza chombo chese nokukasira.
35 Munhu kana abata mimba anoitasei Ano mira kuenda kumwedzi. Kwapera mwedzi nevhiki mbiri anokwanisa kutanga kurutsa mangwanani. Anokwanisazve kuwedzera zvinobuda muchitubu chake zvokunyorovesa bhurugwa.
Hapana zvakawanda zvinoitika zvimwe saka hapana chokutya.
36 Ndine mubvunzo wekuti zvinoita here kubata chirwere kana ndikabuda mumukadzi dzisati ndatunda? Kana mukadzi ane chigwere chechihure ukangopinza chombo chako mukati make usina kondhomu unobata chigwere chete zvisina kuti watunda kana kuti kwete. Kutunda hakunei nokubata chigwere chechihure.
Ndatoshaya kuti chaita kuti ubvunze mubvunzo wakadai chii?
37 Kana uchida kuti beche rako rigare rakaoma unoshandisei? Kana usingahwisisi mashandire emuviri wako chifunga kuita zvakadai. Hachisi chinhu chakanaka kuti uwane chokuita kuti usanyorova muchitubu. Kunyorova kunokonzegwa nokuti waita zemo. Zemo rinoita mufungwa zvadaro muviri wogadzirira kurhojewa nomurume, chitubu chonyorova kupakupinda kwechombo mese musagwadziwa. Hino kana uchiti haudi kunyorova zvinoreva unoda kukuvadza maMEMBRANE ari mukati mechitubu chako. Kana wazova nemakore eve kuda kusvika 30 uchanetseka. Hwisisa kuti pane zvinhu zvitatu zvinobvumidzwa kupinda mukati mako zvinoti chombo chomurume, Tambon kana uri kumwedzi, uye mishonga kana une INFECTION. Hapana zvimwe kana mvura chaiyo usaisa mukati.
38 Ma sperm mangani anoitisa pamuviri Kunongodiwa imwe chete kuti uite mima. Asi kuti murume akuitise mimba anoda akawandisa asi mamwe ese anongoshanda kuwedzera Chanzi yokuti iyoyo imwe chete inozoitisa mimba ikwanise kusvika kuzai zvakanaka.
39 Chinokonzera kuti mukadzi arambe kukwirwa chii?. Chikonzero chikuru kugarokasirira mukadzi. Anosvika pokuti kuvata nomurume hakuna zvakunoreva saka zviri nani kungorega. Kana mukadzi achigarorhojana nomurume, zvichitorawo nguva refu uye murume achitaridza rudo mumba pauviri hwavo, uchaona kuti mudzi anofarirawo kuvata nomurume wake. Rudo chinhu chikuru kumunhukadzi. Ungapopota hako kumukadzi wako asi kana mapedza kutukana taridza mukadzi kuti chakupopotesa ndeichi asi unomuda. Uchaona kuti mukadzi anodawo kuiswa. Zvadaro chiita nguva refu pakuisana kwenyu.
40 Ndinochemedzwa nokusangana nomurume nguva dzese. Pane chakaipawo here? Hakusi kuti zvinorwadza asi kuti zvinonaka zvokuti ndongopedzisira ndachemedzwa nazvo. Ndingaitawo sei? Izvozvo zvauri kuita ndizvo chaizvo zvaunotofanira kuita. Chingoonai kuti kana pane vanhu vanoshanya pamba penyu musavatana nokuti vanhu vakawanda havagadzikani hana kana vakahwa mukadzi nomurume vachivatana. Zvikuru kana vari vanhu vava vakuru. Edzai kumirira kusvika vaenda, kana kunoitira kumwe kwavasingakwanisi kukuhwai muchichemedzana.
41 Ndinofanira kukwirwa kangani pazuva? Ndava nemwedzi nehafu ndaroorwa. Hakuna murairo wekuti kangani pazuva asi wekunoti iwe pawaitira zemo ukada kuvata nomurume wako tsvaka kuti aripi uvate naye. Iyewo paaitira zemo akakuudza, vatazve naye. Hazvisi zvikuverengerana asi zvokubvisana zemo. Usarega murume ane zemo. Usaregazve murume achita mazuva kana maviri usina kuvata naye kana usingagwari kana kuti usiri kumwedzi. Wana mukana wekuvata nomurume wako nguva nenguva. Murume ngaasashuva kuvata newe nokuti paadira iwe uripo kuvata naye.
42 Sei varume vachichiva vamwe vanhu ivo vaine vakadzi mumba? Kushaya Self Respect uye kusharu RESPECT kumukadzo wacho wemumba. RESPECT pamunhu inodzidzswa mwana achiri mudiki. Kana mwana akakura achiona vabereki vake vachipanana RESPECT, anokurawo achipa vamwe RESPECT. Kana akakura achiona vabereki vachitadza kupanana RESPECT ndizvo zvaachaitawo kumunhu waanoroorana naye. Asi tadaro, munhu ega anokwanisa kuona kuti zviito zvake zvakaipa ochinja. Kana uri munhukadzi, hwisisa kuti kwese kwaunoenda uchatoti unyengwe chete nokuti varue havanei kuti une mwana mubereko kana kuti une Ring yomuchato. Varume vakawanda akatoziva kuti une murume kumba zvotoreva kuti anoda chose kuvata newe. Varume vakawanda vanofarira mukadzi atori neurumwe hweumwe murume mukati make. Ndosaka muchiona mahure achiita mari. Murume anobhadhara kuti apinzewo chombo chake ipapo, nokuti vamwe vambopinza. Varume vanofarira urume kutipfuura isu vakadzi.
43 Kune mushonga wekunwa kuti unakirwe nemboro Mushonga kuhwisisa kuti kupinzwa chomo nomurume zvoreva kuti iwe wamuvhurira kuti apinze, kureva kuti mese muri kuita zvamunoda kuita. chitaridzawo kuti hauna kufosiwa kuvhura. Chiuno ngachichishanda basa rokutsvaka kunakigwa nezviri kuitika. Iwe ukanakira chombo, chombo chinokunakirawo. Chinhu choga chinobhowa pavarume ndechokuti paunongotanga kunakigwa nechombo murume anobva atokutundira, nyaya yese yotoperera ipapo iwe uchiri kuda kunakigwa. Saka wana mazano okushanda pamwe nomurume wako kuti umudzidzise kunonoka kutunda. Uchazoona kuti kuiswa kunonaka chose chose
44 Bhinzi inoita sei kana munhu ane zemo? .Bhinzi yomunhukadzi yakangofanana nechombo chomunhurume. Iri panzvimbo imwe chete nechombo, kungosina kwazviviri izvi ndekwekuti murume anoweta nechombo asi mukadzi anoweta neburu riri pazasi pebhinzi.
Pakuita zemo, murume anomira chombo. Mukadzi anomirawo bhinzi uye anozvimbirira matinji obva atanga kunyorova mukati mechitubu kuti musasvuuka pakuzokoirana.
Bhinzi dzine saizi dzakasiyana. Vamwe vane tudikidiki kmwe kakangoita bundu. Vamwezve vane mazihombe anosvika 5cm.
Kana zemo rapera bhinzi inongovatawo sezvinoita chombo.
45 Chibereko chinosukwa nei? Chibereko chinozvisuka chega nguva dzese sokuti waenda kumwedzi, paunopedza chinozvisuka. Asi kana ukaita mimba ikabva yati kurei pamwe unohi enda undosukwa chibereko. Kusukwa uku kunoitwa kuchipatara saka vanotokuudza zvokuita. Hakuna kumwe kusukwa kunoitwa mukore uno. Uchasangana nevanhu vanokupa mishonga yokumwa vachikuudza kuti mushonga unosuka chibereko asi chokwadi ndechokuti vanenge vachikuudza nhema. Kuchipatara vanoita PROCEDURE inohu D and C.
46 Chii chinoita kuti mukadzi wangu achemecheme kana tiri pabonde? Chokutanga kuhwisisa kuti munhukadzi kana akaita zemo rinouya rakawanda zvokuti kana mukambotamba tamba muchiita zvinowedzera zemo and da kuita chinhu chinobvisa zemo riya. Kana apinzwa chombo, zvikuru kana maitire enyu achikwizirira bhinzi kana nyama dzakavakidzana nebhinzi, zvinonaka chose zvokuti kuti anyarare zvinonetsa. Ndoosaka achingotanga ega kuchemerera. Zvinohi kunakigwa kwemunhukadzi kuri 5 times kwemurume pakurhojana kwenyu. Kana murume akanonoka kudiridzira mukadzi, mukadzi anonakigwa chose zvokuti vamwe vanofenda kwekanguva Kana muchiirhojana nomukadzi wako, ona kuti ane mukana wekufema zvakanaka. Usaisa ruoko kumeso kwake kana kuti pamutsiba wake nokuti unokwanisa kumuuraya.
47 Unoona sei kuti murume anokuda?
Apa ndataura kana musina kuroorana.
Kana makaroorana usingazivi kuti anokuda here kana kwete zvoreva kuti uri benzi. Chokutanga ndechokuti anokuudza chokwadi.
Chechipiri anokuudza kuti anokuda nguva dzese.
chechitatu haasvodeswi nokufamba newe pane vanhu
Chechina anosvika pamba penyu achionekwa nehama dzako
Chechishanu iwe unosvika kumba kwavo hama dzake dziripo
Chachitanhatu Haakufosi kuita zvausingadi kuita
Chechinomwe anotaridza rukudzo kuvanhu vaunokoshesa
Chechisere anotaridza kufara kana anewe.
Chechipfumbamwe anokukurudzira kudzidza, kushanda, kuvaka upenyu hwako.
Chegumi, anoronga upenyu hwake newe kuti uhwisise kwaari kuenda nenyaya
Munhu akadai usambomuitira mimba kusvika maroorana. Munhu kwaye. Usabvumazve kuvata naye musina kuroorana. Uchaona kuti iye haakumanikidzi. Anoita zvawada iwe.
48 Ndakaudzwa kuti kuzora hurume
kumeso kunoitisa ganda ritsetseke
Ndizvo here ? Vanoziva vanoti urume hune maCHEMICAL anofidha ganda zvokuti ukagarohuzora ganda rinoita seremwana mudiki. handina kumbozvizamawo asi ndakazvihwa kakawanda. Hapana chakaipa kuzvizama asi tanga waudza murume wako nokuti kune varume vechirudzi chedu vanoti akakuona uchiita zvaasina kumboona uchiita vanofunga kuti paita nyaya dzemishonga. Zviri nani kutanga waudza murume wako kuti uri kuda kuzora urume hwake kuti ganda ritsetseke. Zvadaro ngaamwe mvura yakawanda kuti huwandewo. Mvura ndiyo inowanza urume.
49 Depo Provera inoita nguva yakadii isina kubuda mumuviri kana ndava kuda mimba? Kana ukabaiwa jekiseni re DEPO, unoita nguva yemwedzi mitatu usingakwanisi kuita mimba. Asi kana ukagara nguva refu uchishandisa Depo, paunozomira, muviri unenge wajaira Depo iyi saka unokwanisa kumbononoka kubata mimba.
Asi zvinohi kana ukapfuura gore usina mimba enda unobvunza varapi. Kana uri pasi pegore mirira gore ripere muviri ugadzikana. Pamwe kutomboshandisa makondhomu makamirira kuti nguva irebe kubva pawakagumira kushandisa Depo kusvika paunoda kuita mimba. Hwisisa kuti unofanira kuita mimba muviri wako une BALANCE yema HORMONE. Kana DEPO ichiri mumuviri zviri nani kusaita mimba zvisinei kuti unokwanisa kubata mimba. Vana vanozvagwa vane me CHEMICAL asina balance vanoita mamwe matambudziko.
50 Ko imi mai Chibwe mune murume here uye makaroorana mune makore mangani? Mugere sei? Munomorwawo here mumba?
Uyu mubvunzo wandisinawo kumbobvunzwa. Ndine murume uye ndakawanikwa ndine makore 25 iye ane 27. Tine mwana umwe chete musikana. Tigere hedu zvakanaka asi hatina kusiyana nevamwe vanhu. Pane patinopokana kana kufunga kwasiyana asi tine mutemo wekuti tikapokana tinofanira kupedza nyaya ipapo kana kuronga pokuzotaudzana kuti nyaya ipere nokukasira. Yapera tinobvunzana kuti yaperera papi tobvumirana kuti tahwisisa chinhu chimwe chete pakupera kwayo.
Hakuna nyaya yokupokana unobvumidzwa kutaugwa muBEDROOM. Nyaya ndedzokutaurirana takagara paTABLE topedzerana ikoko. Nyaya yekupokana kwefungwa hainei nezvinodiwa nomuviri saka chero tikapezderana pakutaura, pakunovata kana umwe achida zvinhu anowana zvaanoda pasina zvokuti tambotaudzana.
Kuti tambotukana hakunei nokuvatana asi kana uchine shungu nazvo woratidza shungu nemaitire echuino.
Posted by Mai E Chibwe at 05:43
Thank you so much Amai. We are (or at least my marriage) is indeed blessed to have you and your selfless advise. God bless you.